झूटो बोलेर भ्रम नछर्न बुद्दिजिबिहरुलाई डा. प्रेमसिंह बस्न्यातको अनुरोध –
आदरणीय भैरब रिसाल तथा मित्र अरुण सुबेदी र विद्वान बुद्धी नारायण श्रेष्ठजीलाई अनुरोध :-
म ईतिहास को विद्यार्थी हुँ । प्रमाणमा विस्वास गर्छु। प्रमाण न पुग्ने कुरो ईतिहास हुन्न, कि त्यो कथा हुञ्छ कि उपन्यास।
सन १९५२बाटै नेपाली काङ्रेसको सरकार र मातृका कोइराला प्रधान मन्त्री हुँदा भारतीय सेना नेपाल हुली लिपु लेक लगायत ( लेकको नजिक ) १८ वोटा जति भारतीय सैनिक पोस्ट खडा गरेको । जसको उदेश्य चीन पत्टिको चियो चर्चा गर्नु र दलाई लामाका समर्थक तिब्बती हरुलाई नेपाल को भूमिबाट प्रबेस गराइ भारत पठाउनु थियो। भारतीय सैनिक मिसन को खबर र अमेरिका को तालिम, हतियार र पैसाले नै पछि दलाई लामाका खम्पा सेना मुस्ताङ र मनाङमा तैनाति गरियो। खम्पा काण्ड हुने बेलाभन्दा कारीब ४ वर्ष अगाडि नै भारतीय सेना उत्तरि सीमाबाट फर्कियो।
सन १९५२बाट १९६९सम्म १७ वर्ष भारतीय सेनाले ऊत्तरि पोस्ट छाडेनन। मातृकाले हुलेको सेना महेन्द्र राजा र कृति निधी प्रधान मन्त्रीले साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर देशबाट लखेटे।
पछि चीन र भारत को युद्ध भयेपछि अलि पर रहेको पोस्ट फेरि लिपु लेकमा बस्यो। सैनिक रण नीति को कारणले अटेरी गरेको थियो। यसलाई फर्काउने प्रयासरत राजा महेन्द्र को असामायिक् निधन भयो।
पञ्चायतसँग कालापानी साटे भनेर कुर्लिने तपाईं बिद्द्वान हरुले प्रमाण दिनुहोस्। होइन भने तपाईं हरुले कि बिदेशी को मा म खाएको कि त कुनै राजनैतिक दलको गल्तीलाई बचाएको ठहरिने छ।
भारतीय पञ्जाबाट नेपाललाई फुत्काउने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाललाई सदस्याता दिलाउने, नेपाल को विकास को पूर्वधार को जग बसाल्ने राजा महेन्द्र थिय। अहिले आएर तपाईं हामी जस्ता गुन र नून काढाले जे पायो त्यही बात लगाउने। अहिले मेरो र तपाईं हरुको ब्याङ्क खाता, धन सम्पत्ति को चेक् गर्ने हो भने थाहा लाग्ने छ, को कस्को माञ्छे भनेर।
विशेष गरी बुद्धी नारायणजी नापी बिभाग को हाकिम भैसकेको माञ्छे, तपाईंले बोलेका कुरा को प्रमाण दिनै पर्छ। अन्यथा ” प्रोपोगाण्डा ” फैलाउने तपाईं हरुले समाजमा माफ माग्नुस्।
फेरि पनि अनुरोध छ : महेन्द्र राजाले पञ्चायतसँग कला पानी साटेको र महेन्द्रकै पालामा मात्र काला पानी ईलाकामा भारतीय सेना राखेको प्रमाण दिनुस्। म भोलिबाट राजा महेन्द्रको बिरुध्ह बोल्ने छु।
अन्तमा, काला पानी – लिम्पियाधुरा समेत् नेपालकै हो। नेपाल को संविधानमा समेत् नेपाल को ४ किल्ला कित्टान गर्न न सक्ने वर्तमान नेता हरुले बिदेशी हरुको सजिलोको लागि लेखेनन। हामी, सबै राज नैतिक दल एकै हुनु पर्छ। नेपाली भूमि कुट नैतिक दबाबबाटै फिर्ता लिनु पर्छ।
त्योभन्दा पहिला लिम्पियाधुरा लगायत सबै विवादित नेपाली जमिन समेटिएको नेपाली नयाँ नक्सा बनाउनु जरुरी छ।
Let us speak for real history not for story for making propaganda.
मरेको माञ्छेको खोइरो खानेर तपाईं हामीले पाप काम न गरुम। सेतोलाई सेतो कालोलाई कालो भनुम। क म से क म नयाँ पुषतालाई भ्रम न फैलाम ।
मैले नेपाल को ईतिहास र राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै पनि पात्र को बारे उल्टा लेखे भने भ्रम फैलाय भने मलाई पनि तपाईं हरुले कारबाही गर्नुस् ” लात ठोक्नुस् ” म सजाय भोग्न तयार छु।
साभार:- डा. प्रेमसिंह बस्न्यातको facebook बाट
← दस्तावेज – नेपालको ईतिहासको त्यो पहिलो घुस
आफ्नै प्रेमिकालाई सामूहिक बलात्कार गराउने शैलेसलाई ६२ महिनाको सजाय →